7 -atụghị anya ojiji ikpe maka Virtual Adị - News Ọchịchị
7 -atụghị anya ojiji ikpe maka Virtual Adị
Anyị niile maara ihe anyị chọrọ si VR: mma ohere simulator egwuregwu. Ma eleghị anya, movies anyị nwere ike anya gburugburu na, oke. Ma ndị ụlọ ọrụ na-adịghị ekara nanị site anyị tụrụ anya. Ọ bụ jupụtara injinia na creators, na-edu VR ka ebe anyị agaraghị chere. Lee ihe atụ ụfọdụ nke VR jiri na anyị apụghị ịtụ anya.
VirZoom: Eme Mgbatị Fun
Nke nwere abụghị fun; ọ na-eme ị na-ahapụ nkasi obi nke bed ime agwụ ike, ugboro ugboro ihe aga-eme na oyi na-atụ, isi awọ eziokwu ruo mgbe ị na-esi ísì. VirZoom zaa ndị na-agwụ ike akụkụ. Nke a barebones, collapsible mmega igwe kwụ otu ebe bụ dakọtara na nnukwu ika VR enyoanya na odomo mmega n'ime a egwuregwu. Ị na-agaghị nnọọ pedaling - na ị na-eme a Unicorn ada, obon yiri mgbaaka ma ọ bụ ihe ọ bụla. A bụ ụfọdụ n'ime na imeju agụụ ozugbo, na ebe a bụ ụfọdụ VR nke ahụ bụ ihe anụ ahụ karịa ihe ọ bụla ọzọ na ahịa.
Ike ichere maka VR ime ka crunches fun. Ma eleghị anya, ha ga-atụgharị m n'ime a catapult!
MindMaze: Tricking MKpọnwụ Ọrịa n'ime Healing
MindMaze na-eme ka VR rigs na-enyere ndị mmadụ bụ ndị nwetara ahụmihe ọrịa strok enwetaghachi akara nke ha aka na ụkwụ. Medical ọkà mmụta sayensị ama mere nnyocha, ma na-amụba ọsọ nke na-adịghị ike N'ịdị na VR-eme ka ọrịa strok ọrịa na-eji ya ọzọ na ndụ n'ezie. MindMaze na-eyiri usoro na a egwuregwu, otú ọ na anya na-erughị ka agwụ ọgwụ na ndị ọzọ dị ka a fun videogame. Nke ahụ bụ otú nne nne gbagwojuru ya elu akara ịgwọ.
ezi 3D: Inyocha The ime Of Your Ndidi
Ma ghoro ọrịa n'ime ahụ ike abụghị nanị ọgwụ ojiji nke VR. EchoPixel na-eji ha VR 3D Onyonyo technology iji nyere ndị dọkịta anya nke uche ahụ insides nke ọrịa ha ka ha. The software na-ahapụ ndị dọkịta na-ahụ enyocha kwa nke ọrịa na 3D yana ịgbanwe ihe ha n'ụzọ ụfọdụ ka mma kwadebe maka ịwa.
Mmiri na ebili mmiri nke Grace: Mmetụta ọmịiko Site Movies
Mmiri na ebili mmiri nke Grace bụ isii nkeji nkiri gbara na Liberia na-ahapụ ndị na-enweta ujo na trauma nke ndị dị ndụ na ihe oria Ebola oria a ogu-gburu obodo. Nke a nwere dọtara ndị dị otú ahụ iche iche na òtù dị ka UN na Vice, na ọ na-enyere na-eto eto mmetụta ọmịiko n'ebe ndị mmadụ na-ebi ndụ na ọnọdụ anyị (na mbụ) apụghị ọbụna iche. Ọ na-ekedo n'ime immersive oru ndi, nke na-eme atụmatụ na ka ị na ọ dịghị ihe ọzọ enwetaghị a ghọta nke ihe ọ pụtara ịbụ enweghị ebe obibi na US.
Samsung na isii ọkọlọtọ: Real Virtual igwe na-agba okirikiri
tupu VR, anyị nwere immersive nkiri ahụmahụ, nke eji hydraulics ike ịgbanwe ihe a pụrụ iche ụlọ mgbe ị na-ele a CGI rollercoaster nkiri. Ọ bụ a ihe gara aga now, n'ihi na unu nwere ike ugbu a enwetaghị a VR na-agba ịnyịnya mgbe ịnyịnya n'ezie igwe na-agba okirikiri. Entertainment park ibu isii ọkọlọtọ ebere ye Samsung ime ka VR headsets ha ala coasters. Ụfọdụ n'ime VR ahụmahụ dochie igwe na-agba okirikiri na spaceship agha na ọbịa na mbara igwe, ebe ndị ọzọ wetara ihe nke a Super-Man ahụmahụ.
N'eziokwu, nke a yiri ka a pụrụ ime iji mee ala coasters na-erughị egwu!
Virtual Adị? M ikpe? Ọ dị ihe ọzọ nkwenye karịa ị na-eche! Crime Mpaghara-ama ịmepụtagharịa na 3D ụdị, nke na-ahụ squished ka 2D ozugbo na ha na-e biri ebi na akwụkwọ. VR mpụ idaha ntụrụndụ ga-emechu ndị ụlọ ikpe ahụmahụ kama dị nnọọ nanị na-ahụ mpụ idaha. University of Zurich esesịn ịmepụtagharịa a idaha na a égbè na agafeela uwe ojii nnyocha, otú ikpe na jurors ga-atụ anya treks n'ime VR.
Eme astronauts na-eche n'ụlọ
Ịga na mbara igwe na-aga ịbụ prohibitively oké ọnụ maka adị kwa ụbọchị njem nleta maka ezi oge ụfọdụ. Luckily, e nwere atụmatụ maka VR njegharị nke ohere. Otú ọ dị, e ka ga na-ndị mmadụ na-aga n'ebe ahụ, na ihu ize ndụ ndị dị dịtụ subtler nkịtị Degradation. NASA emewo tapped Dali nke Dartmouth ịzụlite VR software nke ga-ekwe ka astronauts na-a obere iberi nke home ebe ọ bụla ha na-aga. Ọ ga-abụ a VR ntụrụndụ nke picnic na osimiri ma ọ bụ na ha dum home, ọ ga-abụ ihe ga-enyere ndị na-eme njem na Mars nnọọ.
Lee? The VR n'ọdịnihu bụ ma fun na iju. Na akụkụ kasị mma bụ na nke ugbu a na ihe mgbochi nke ọnụ ụzọ mara mma ala. Ị nwere ike usoro stof na onye ọrụ-enyi na enyi engines ka Ịdị n'Otu na nke bụ adịgboroja Engine 4. Ọtụtụ ndị ọhụrụ VR ngwa na-adịghị na anya mgbagwoju, otú i nwere ike iji ngwaahịa nlereanya saịtị dị ka CGtrader iji nweta gị ụdị ngwa ngwa. Na ngwaọrụ na aka, gị na mkpa ihe echiche. Olee otú ihe a VR emeju maka crunches na-enyo m n'ime a catapult?
18121	4 Virtual eziokwu
← The ụbụrụ nke Nchegbu ndị mmadụ nwere ike ịmata ihe ndị World dị iche iche android N: Google ekpughe Future nke OS →